Gantry အမျိုးအစားစက်ပစ္စည်းစင်တာစက်ရုံ - China Gantry အမျိုးအစားစက်ပစ္စည်းစင်တာထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
1200 * 1100 * 800mm BT50 တံတားအမျိုးအစားစက်ယန္တရား BTMC1012 Multi-Axis
အမည်: နှစ်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံ - BTMC1012 ဇယားအရွယ်အစား - ၉၀၀ * ၁၄၀၀ မီလီမီတာခရီးသွားခြင်း - ၁၂၀၀ * ၁၁၀၀ * ၈၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအလှည့်အရှိန် - ၈၀၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: ၁၅ - ၁၈.၅kw အလေးချိန် - 1600kgs အလေးတင်: 12000kgs X Axis Travel 1200mm မြင့်မားသောမြန်နှုန်းမြင့်တိကျသောကော်လံနှစ်လုံးကော်စက်စက်ကိုပုံသွင်းရန် BTMC1012 ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက် ၁။ BTMC10 စီးရီးသည်အရွယ်အစားကြီးမားသော VMC စက်၏ထုတ်ကုန်ကိုအဆင့်မြှင့်သည် (VMC1270 / 1370/1580/1690/1890) အားသာချက် 2. Mahcine proccessing precisi ...
ကြီးမားသော Gantry ကြိတ်စက်များ BTMC-2204 0.01mm တည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုသက်တမ်းရှည်
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-2204 စားပွဲတင်: 4000 * 1800mm X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: 4000/2200 / 1000mm Gantry ၏အကျယ်: 2200mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်း: 6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ: 22kw Gantry double ကော်လံ CNC millingcenter BTMC-2204 ဒီ gantry machining စင်တာတွင်အဓိကအားဖြင့်ဗိုင်းလိပ်တံကိုချောဆီအရည်ကြည်စနစ်၊ အအေးပေးစနစ်၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါဟာအဓိကအား hea အတွက်အသုံးပြုသည် ...
အသေးစား Gantry အမျိုးအစားဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ 8000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ ၉၀၀ * ၂၀၀၀ မီလီမီတာအလုပ်လုပ်နိုင်သောစားပွဲ
အခြေအနေ - ဗို့အားအသစ် - ဖောက်သည်၏လိုအပ်သောစားပွဲတင်: 900 * 2000mm Gantry Gap: 800mm X / Y / Z Axis ခရီးသွားခြင်း - 2000/1200 / 800mm Spindle Taper: BT50 (φ155） ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: 8000rpm Spindle Motor: 15-18.5KW X Axis) လျင်မြန်သောအစာကျွေးခြင်း - ၁၈ မီတာ / မိနစ် (X ၀ င်ရိုးအားကြီးသောဘောလုံး ၀ င်ရိုး) Y Axis အမြန်အစာ - ၁၈ မီတာ / မိနစ် (Y ဝင်ရိုးတန်းအားကြီးသောဘောလုံး ၀ က်ဘ်) Z Axis အမြန်နှုန်း - ၁၈ မီလီမီတာ / မိနစ် (Z Axis Hard Way) စားပွဲ T အထိုင်: 7-22 * 125 (အဘယ်သူမျှမအရွယ်အစား * အသံ) အရွယ်အစား: 5000 / * 2800 * 3600mm အသားတင်အလေးချိန်: 14000kgs 900 * 2000mm workt ...
လေးလံသောနှစ်ဆကော်လံ CNC စက်စက်၊ Gantry အမျိုးအစား CNC စက်စင်တာ BTMC-1225
အမည်: နှစ်ဆကော်လံစက်စင်တာပုံစံ - BTMC-1225 စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၉၀၀ * ၂၅၀၀mm ခရီးသွားခြင်း - ၂၅၀၀ * ၁၂၀၀ * ၈၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၈၀၀၀rpm / ၁၂၀၀၀rpm / 15000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 / BT40 ဗိုင်းလိပ်တံ: 15-18.5kw ဝန်ထုပ် - 3000kgs အသားတင်အလေးချိန် - ၁၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ်လေးလံသောနှစ်ဆကော်လံ CNC စက်စက်များ၊ Gantry အမျိုးအစား CNC စက်စင်တာ BTMC-1225 1. Gantry စက်စင်တာသည်ပုံသေရောင်ခြည်အမျိုးအစားနှစ်ဆဒေါင်လိုက်ရိုးတံတံခါးပေါက်ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။
Gantry နှစ်တိုင်ကော်လံစက်အကြီးစားသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း ၃ Axis4Axis BTMC-1516Q
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-1516Q ဇယား: ၁၃၀၀ * ၁၆၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၁၆၆ / ၁၆၆၀ / ၈၅၀ မမ Gantry ၏အကျယ်: ၁၆၅၀mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 အလှည့်အရှိန်: ၆၀၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံ: 15kw Gantry နှစ်ထပ်ကော်လံ CNC စက်စင်တာ BTMC-1516Q 1. မြင့်မားသောခံနိုင်ရည် - သံဖြင့်ပြုလုပ်သောမြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု - သံဖြင့်ပြုလုပ်သောအိပ်၊ အလုပ်၊ စားပွဲဝိုင်း၊ လက်ကိုင်အစရှိသည့်အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ၊ အပူအိုမင်းခြင်းနှင့် VSR ကုသမှုများ၊ မြင့်မားသောစက်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများ ၂။ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြင့်မားမှု ...
1300 * 3000mm စားပွဲနှစ်လုံးကော်လံစက်စက် 15KW Spindle Motor JOINT
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-1530Q စားပွဲတင်: ၁၃၀၀ * ၃၀၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ၃၀၀၀ / ၁၆၆၀ / ၈၅၀ မမ Gantry ၏အကျယ်: 1650mm Spindle Taper: BT50 Rotation Speed: 6000rpm Spindle Motor: 15kw Gantry နှစ်ထပ်ကော်လံ CNC စက် centerBTMC-1530Q 1. စက်ကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအုတ်မြစ်ဒီဇိုင်းကနေအမြန်နှုန်းမြင့်နှင့်တိကျမှန်ကန်သောစဉ်ဆက်မပြတ်စက်၏အာမခံသည်အထိအဆင့်အားလုံးမှာ ANSYS နှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ဗဟိုမှထုတ်လုပ်သည့်အခါပုံပျက်သောပုံသေအားစမ်းသပ်ခြင်း။
6000rpm ကြီးမားသော gantry ကြိတ်စက်, တိကျသော CNC စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-2202 ဇယား: ၁၈၀၀ * ၂၀၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: 2000/2200 / 1000mm Gantry ၏အကျယ်: 2200mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်း: 6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ: 22kw Gantry နှစ်ထပ်ကော်လံ CNC millingcenter BTMC-2202 အကြီးစားသတ္တုများသွန်းလောင်းခြင်းကဲ့သို့သောစားပွဲ၊ အိပ်ယာ၊ တိုင်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်လျှောခေါင်းအုံးကဲ့သို့သောကြီးမားသောသတ္တုများသွန်းလောင်းမှုသည်အဆင့်မြင့်သောဗဓေလသစ်သဲများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ Cast ၏အတွင်းပိုင်းလိုင်သည်ပျားလပို့ကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းကအဆင့်မြင့်တယ်။ ...
အကြီးစားသတ္တုများပုံသွန်း CNC မြန်နှုန်းမြင့်စက်စက် BTMC-1016 BT50 ဗိုင်းလိပ်တံ Taper
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-1016 ဇယား: ၉၀၀ * ၁၈၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: 1600/1100 / 800mm အကျယ်အ ၀ န်း: 1100mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 အလှည့်အမြန်နှုန်း: 8000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ: 15kw Gantry နှစ်ထပ်ကော်လံ CNC millingcenterBTMC-1016 1. အလွန်အမင်းတင်းကျပ်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံ, သေတ္တာအမျိုးအစားရောင်ခြည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကြီးကြပ်ကော်လံထပ်ဆောင်းစက် rigidity.2 ပါရှိပါတယ်။ တိုးမြှင့်ဆလိုက်လမ်းမျက်နှာပြင်များထိရောက်စွာ upgra နှင့်အတူ slant ရောင်ခြည်ဆောက်လုပ်ရေး ...
30KW ဗိုင်းလိပ်တံ Motor3Axis ဒေါင်လိုက်စက်စက်စင်တာ Gantry နှစ်ထပ်ကော်လံ BTMC-2503
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-2503 ဇယား: 3000 * 2300mm X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: 3000/2700 / 1000mm Gantry ၏အကျယ်: 2700mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်း: 6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ: 30kw Gantry double column CNC စက် centerBTMC-2503 ဤစက်ကို CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ တူးခြင်း၊ တွန်းကန်ခြင်း၊ သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ သံအစရှိသည့်ပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်မှို ...
CNC4ဝင်ရိုးတန်း VMC နှစ်ဆကော်လံစက်စက်ရုံ BTMC-1012 8000rpm Rotation Speed
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-1012 ဇယား: 900 * 1400mm X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: 1200/1100 / 800mm Gantry ၏အကျယ်: 1100mm Spindle Taper: BT50 Rotation Speed: 8000rpm Spindle Motor: 15kw Small gantry typeCNC စက်စင်တာ BTMC-1012 ဤစက်ကိုသံမဏိ၊ သံမဏိ၊ သံ၊ စသဖြင့်သံမဏိ၊ သံမဏိစသည့်သံမဏိများ၊ သံမဏိများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ...
VMC Beam ဆောက်လုပ်ရေးနှစ်တိုင်ကော်လံစက် Centre အကြီးစားသတ္တုများပုံသွန်း CNC BTMC-2505
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-2505 စားပွဲတင်: 5000 * 2300mm X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၅၀၀၀ / ၂၇၀၀ / ၁၀၀၀ မီလီမီတာအမြင့်အကျယ် - 2700mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 အလှည့်အမြန်နှုန်း: 6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ: 30kw Gantry double column CNC millingcenter BTMC-2505 စက်ကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ဒီဇိုင်းမှသည်အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်သောစဉ်ဆက်မပြတ်စက်၏အာမခံချက်အထိအဆင့်အားလုံးတွင် ANSYS ဖြင့်ဆန်းစစ်သည်။ ပုံသဏ္whenာန်ဖြစ်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်လာသောပုံပျက်သောအခြေအနေအတွက်ထုတ်လုပ်သည့်စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခု ...
တိကျသောကော်လံကော်လံစက် 1300 * 2500mm ဇယားအရွယ်အစား BTMC-1525
အမည်: Gantry အမျိုးအစားနှစ်တိုင်ကော်လံစက်စင်တာပုံစံအမည်: BTMC-1525 ဇယား: 2000 * ၁၂၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: 2000/1650 / 800mm Gantry ၏အကျယ်: 2000mm Spindle Taper: BT50 Rotation Speed: 6000rpm Spindle Motor: 22kw Big sizegantry typeCNC စက်စင်တာ BTMC-1525 ထိုကဲ့သို့သော worktable, အိပ်ရာ, တိုင်, လက်ဝါးကပ်တိုင်ရောင်ခြည်နှင့်လျှောခေါင်းအုံးအဖြစ်အကြီးစားသတ္တုများပုံသွန်းအဆင့်မြင့်ဗဓေလသစ်သဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Cast ၏အတွင်းပိုင်းလိုင်သည်ပျားလပို့ကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းကအဆင့်မြင့်တယ်။ အယ် ...